Sida Loo Dhiso Dhibcaha Ganacsiga 2021
Bogga ugu weyn Sida Loo Dhiso Dhibcaha Ganacsiga 2021
Way ka sahlan tahay sidaad u malaynayso inaad ogaatid sida loo abuuro credit ganacsi si degdeg ah. Waxay u baahan tahay cilmi-baaris lagu sameeyo sida ugu dhakhsaha badan ee loo abuuro credit ganacsiga, oo ay ku xigto horumarinta hababka amaah-dhisidda ganacsiga ee la xaqiijiyay inay shaqeeyaan.
Ugu dambeyntii, horumarinta credit ganacsiga si degdeg ah oo dhan ku saabsan ka fogaanshaha gefafka aasaasiga ah ee shirkadaha intooda badan - iyo, ka sii muhimsan, ku dhegganaan-iyo-dhab ah qorshaha dhismaha credit-ganacsi oo shaqeeya.
Baro sida dhaqsaha leh loogu horumariyo sumcadda ganacsiga adiga oo iska ilaalinaya gefafka guud ee ay sameeyaan milkiilayaasha kale ee ganacsiga oo aad ku dhegganaato naqshadda credit ganacsiga ee aanu kuu dejinay adiga.
Waa maxay credit Business sideese u shaqeysaa?
Maxaad Ugu Baahan Tahay Inaad Si Dhakhso Ah U Sameysato Amaahda Ganacsiga?
1. Dar-dargeli kobaca shirkaddaada
2. Si degdeg ah u hel maalgelin
3. Kordhi khadadka amaahda ganacsiga
4. Wanaaji shuruudaha amaahashada
5. Kala saar ganacsigaaga iyo dhaqaalahaaga shakhsi ahaaneed
6. La socodka kharashaadka waligeed may fududayn
7. Ka dhig xilliga cashuurta in yar oo ka yar cashuurta
Xeeladaha Lagu Dhisayo Amaahda Ganacsiga
Sida Dhaqso Loogu Sameeyo Amaahda Ganacsiga
Tallaabada 1: Dooro Qaab-dhismeedka Ganacsiga Haboon
Tallaabada 2: Hel Lambarka Aqoonsiga Canshuurta Federaalka (ITIN) (EIN)
Talaabada 3: Furo akoon bangi ganacsigaaga
Talaabada 4-aad – Ku Samee Aaamin Iibiyaasha/Alaab-qeybiyeyaasha Ka Warrama
Tallaabada 5: Isha ku hay warbixinnada deynta ee shirkaddaada
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Sida Loo Dhiso Dhibcaha Ganacsiga
Amaahda ganacsigu waa awooda ay shirkaddu u leedahay in ay wax iibsato oo ay hadhoow bixiso. Markaad sameysato qiimeyn ganacsi oo wanaagsan, waxaad fududeyn kartaa inaad lacag amaahato marka ay shirkadu u baahan tahay.
Asal ahaan, waxaad samaysaa deyn shirkadeed iyada oo ku saleysan taariikhda maaliyadeed ee ganacsigaaga - taasi waa, sida aad u maareyso deyn kasta oo la siiyay ururkaaga, sida kaararka deynta, deynta, khadadka deynta, khadadka ganacsiga alaab-qeybiyeyaasha, iyo in ka badan.
Deynta ganacsigu, dhanka kale, waxay la xiriirtaa lambarkaaga aqoonsiga loo-shaqeeyaha, ama EIN, halkii aad ka ahaan lahayd lambarkaaga badbaadada bulshada.
Ugu dambeyntii, sida deyntaada shakhsi ahaaneed ay u muujiso deyntaada deyn-qaade ahaan, buundada ganacsigaagu waxay muujineysaa in shirkaddaadu tahay deyn la isku halayn karo iyo in kale.
Akhri ALSO: Sida Dhakhso Loogu Dhisayo Credit 2021
Sababta aasaasiga ah ee muhiimadda ay leedahay in si degdeg ah loo sameeyo maalgelin ganacsi waa socodka lacagta caddaanka ah. Ma ogtahay in dhibaatooyinka socodka lacagta caddaanka ah ay sababto in ka badan 80% shirkadaha inay ku fashilmaan?
Arintan kaliya ayaa si fudud looga fogaan karaa haddi shirkad ay si degdeg ah u dhisto credit ganacsi oo ay ku xalliso arimaha socodka lacagta caddaanka ah. Tani maaha sababta kaliya ee lagu abuurayo deyn ganacsi si dhakhso ah, laakiin waa tan ugu muhiimsan.
Faa'iidooyinka kale ee degdega ah u samaynta maaliyadda ganacsiga waxaa ka mid ah:
1. Dardar geli kobaca shirkaddaada
Waxaad si degdeg ah uga faa'iidaysan kartaa deynta (sida, lacagta dadka kale ([OPM)) markaad si dhakhso ah u abuurto credit ganacsi, taas oo ah sida ugu dhakhsaha badan ee aad u kobcin lahayd shirkaddaada.
ARAG SIDOO KALE: 15 Kaararka Amaahda Birta Ugu Fiican Sanadka 2021
Marka aad leedahay deymo shirkadeed oo heer sare ah, waxaa laguu oggolaan doonaa deymo cusub si dhaqso leh.
3. Kordhi khadadka deynta ganacsigaaga
Amaah-bixiyeyaashu waxay jecel yihiin inay ammaan siiyaan shirkadaha la aamini karo.
4. Horumari shuruudaha amaahashada
Markasta oo ay sii fiicnaato buundada credit-ka iyo credit-ka badan ee aad leedahay, ayaa ka sii fiicnaanaya heerka dulsaarka iyo shuruudaha kale, sida credit credit.
Tani waxay ilaalinaysaa hantidaada gaarka ah iyo deyntaada haddii ay dhacdo in shirkaddaadu ay la kulanto dhibaatooyin.
Kaarka deynta ee shirkadda, sida koontada bangiga ganacsiga, ayaa laga yaabaa inuu kaa caawiyo inaad la socoto oo aad la socoto kharashyada.
Amaahda lacag si aad u ballaariso ganacsigaaga waxay la socotaa faa'iidooyin canshuureed oo badan. Dulsaarka deymaha muddada-gaaban iyo khadadka deynta waa laga jari karaa.
Waxaa laga yaabaa inaad macluumaadkan oo dhan siiso xisaabiyaha guud ee shahaadeysan, kaasoo awood u yeelan doona inuu macneeyo dhammaan oo ku helo faa'iidooyinka canshuurta ee ugu fiican ee suurtogalka ah.
Akhri ALSO: Software -ka Canshuurta ee ugu Fiican 2021
Waxaa jira hab toos ah oo si deg deg ah loo sameeyo credit ganacsiga. Waa inaad raacdaa laba tilaabo oo istiraatijiyaddan ah: Markaad baranayso sida loo dhiso buundada ganacsiga, iska ilaali inaad samayso khaladaadka caadiga ah ee shirkadaha badankoodu sameeyaan.
Samee credit ganacsi degdeg ah adiga oo la samaynayo xidhiidho iibiyayaal iyo amaah-bixiye kuwaas oo si dhakhso leh kuugu siin doona credit.
Waa kuwan waxa ay tahay inaad xasuusato:
Hubi haddii shirkaddaadu tahay shirkad sharci oo gaar ah. Si aad u ilaaliso xijaabka shirkadda, waxaad u baahan doontaa inaad samaysato shirkad ama aad barato sida loo bilaabo shirkad masuuliyad xaddidan leh (LLC).
Hel Lambarka Aqoonsiga Loo-shaqeeyaha (EIN) (EIN). Si aad u furto xisaab bangi ganacsi, waxaad u baahan doontaa EIN. Tababarkayaga ayaa ku tusi doona sida loo helo EIN waqti yar gudaheed.
Wax ka baro shabakada 30-ka iibiye iyo sida ay u shaqeeyaan. Liiskan 30ka ganacsade ee bilawga ah waa meel fiican oo laga bilaabo.
Baro faraqa u dhexeeya kaararka kredit ganacsiga ee sugan iyo kuwa aan la hubin. Kuwani waxay kaa caawin doonaan samaynta credit ee LLC kaaga.
Ballanqaad ku samee inaad ku bixinayso lacagahaaga wakhtigeeda, wakhti kasta. Haddii aad ka gudubto lacag-bixinta, buundada deymaha shirkadu waxay la kulmi doontaa isla qaddarka credit-ka shakhsi ahaaneed. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku bixiso qaansheegyadaada waqtigii loogu talagalay, dhibcaha deynta ee shirkaddaadu way fiicnaan doontaa.
Faham noocyada badan ee xafisyada deymaha shirkadaha Dun & Bradstreet, Ganacsiga Khibradda ah, iyo Ganacsiga Yaryar ee Equifax waa saddexda xaruumood ee amaahda ganacsi ee ugu waaweyn.
Faham aasaaska credit ganacsiga. Waxaad baran kartaa sida kor loogu qaado credit ganacsiga marka aad diyaar u tahay. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad si dhakhso leh u samaysato credit ganacsi.
Akhri Sidoo kale: Maareynta Ganacsiga Yaryar Tilmaamaha Waxtarka leh ee Guusha
Talaabada ugu horeysa ee ganacsigaaga iyo lacagtaada gaarka ah aad ku ilaalinayso waa inaad ku samaysato credit magaca shirkadaada. Halkan waxaa ah shan siyaabood oo fudud oo kaa caawin kara inaad si dhakhso leh u hesho sumcadda shirkadda.
Waa inaad doorataa qaab-dhismeedka ganacsiga, sida LLC, LLP, ama shirkad, si aad shirkaddaada uga dhigto shirkad sharci oo gaar ah. Xusuusnow in mulkiilaha keligiis uusan ahayn wax sharci ah oo gaar ah.
Kadib markaad abuurto goobtaada ganacsiga, talaabada xigta waa inaad diwaangeliso. Marxaladani waxay ku salaysan tahay qaab dhismeedka shirkaddaada iyo halka ay ku taal.
Fiiri Hagaha Ganacsiga ee SBA wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan doorashada qaab dhismeedka saxda ah ee ganacsigaaga iyo diiwaangelinta.
Isticmaalka qalabka taageerada IRS, waxaad codsan kartaa a Aqoonsiga canshuurta federaalka bilaash. Kani waa lambar sagaal ka kooban oo loo qoondeeyay ganacsigaaga oo aad isticmaali doonto si aad u xarayso canshuur celinta shirkadda, abuurto akoon ganacsi, codso shati iyo ogolaansho, oo aad codsan doonto credit ganacsi.
Post laxiriira: Amaahda Qaadashada Ganacsiga
Waxaad u baahan doontaa inaad u furto xisaab bangi ganacsi shirkaddaada marka aad hesho aqoonsiga cashuurta federaalka. Tani waa tallaabo lagama maarmaan ah in la sameeyo farqi cad oo u dhexeeya ganacsiga iyo kharashka shakhsi ahaaneed.
Xidhiidhada bangigaagu waxay muhiim u yihiin awooda shirkaddaada inay lacag ururiso. Koontadaada bangiga ganacsiga kaliya uma adeegto tixraac bangi oo ku saabsan codsiyada deymaha laakiin sidoo kale waxay bixisaa macluumaadka muhiimka ah ee deyman bixiyayaasha ay isticmaalaan inta lagu jiro nidaamka oggolaanshaha maalgelinta.
Codsashada shuruudaha saafiga ah iibiyeyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha ayaa ah mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu horumarinayo credit ganacsiga.
Iibka amaahda iyo lacag-bixinta waxaa lagu wargeliyaa wakaaladaha warbixinta deymaha ee shirkadda marka aad gadato sahayda, alaabada, ama alaabada kale ee deynta.
Xogta deymaha ee shirkaddaada iyo warbixinta deynta ganacsiga waxa loo abuuray natiijada hawshan. Qiimaynta amaahda ganacsiga (dhibcaha) ayaa la abuuraa ka dib markii la soo sheego khad ganacsi oo badan.
Xusuusnow inaad doorato iibiyeyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha ka diiwaan gashan xafiiska warbixinta deynta ganacsiga. Mid kasta oo ka mid ah cilaaqaadkaaga ganacsi waxa suurtogal ah in loo isticmaalo tixraac ganacsi ahaan codsiyada amaahda mustaqbalka.
Sababtoo ah waxaa jira saddex wakaaladood oo warbixinta amaahda ganacsiga aasaasiga ah, la socodka mid kasta oo ka mid ah faylasha deynta ee shirkaddaada waa muhiim. Wakaalad kastaa waxay xogta ka soo ururisaa ilo kala duwan waxaana laga yaabaa inay hayso tafaasiil kala duwan oo ku saabsan ganacsigaaga.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in hay'ad kasta oo amaah ganacsi ay ku siiso hab aad ku cusbooneysiiso macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan shirkaddaada. Haddii aad hesho macluumaad duugoobay ama khalad ah, waa inaad la xiriirtaa wakaaladda si loo saxo.
Waxaa laga yaabaa inaad awood u yeelatid inaad hubiso ogolaanshaha credit ka wanaagsan, heerka dulsaarka, iyo shuruudaha dib u celinta ee deymaha iyo khadadka deynta haddii aad leedahay diiwaan ganacsi oo wanaagsan.
Samaynta xisaabaadka kala duwan ee leh noocyo kala duwan oo credit ganacsi, sida kaarka deynta ganacsiga ama line of credit, waa sidaas oo kale muhiim ah. U oggolow shantan tallaabo ee aasaasiga ah inay u dhaqmaan sidii barta bilawga ah ee dhidibbada loogu taagi lahaa sumcadda shirkaddaada.
Shirkadaha Caawinta Dhisida Ganacsiga
Haddii aad rabto in aad bilowdo ama aad balaadhiso astaanta deymaha ee shirkaddaada, waa in aad leedahay akoonnada ganacsiga oo laga soo sheego ugu yaraan hal xafiis oo deyn ganacsi. Sababtoo ah deyn bixiyayaasha ganacsiga loogama baahna inay u sheegaan credit bureaus-ka ganacsiga, waa inaad raadsataa amaah-bixiyeyaasha sameeya.
Halkan waxaa ah shirkado iyo adeegyo kaa caawin kara inaad u dhisto sumcad ganacsi shirkaddaada.
1. Credit Xoog
Credit Strong Business waxay bixisaa akoon-dhisaha amaahda. Koontada wax-dhisaha waa amaah qayb-dhigis ah oo lacag caddaan ah oo aad ka bixi karto si aad u dhisto astaanta deynta ganacsigaaga. Koontadu ma laha wax shuruud ah oo deebaaji ah waxayna la socotaa qorshayaal shan iyo 10 sano ah oo diyaar ah. Waxaad xidhi kartaa akoontada goor hore iyada oo aan wax kharash ah ama ganaax ah la saarin.
eCredable Lift waa adeeg lacag bixin ah oo aad u isticmaali karto inaad ku darto lacagaha biilka ee shirkaddaada warbixinnada deynta ganacsiga.
Markaad is diiwaan geliso, waxaad ku xidhi kartaa ilaa siddeed nooc oo xisaabaadka utility ah, oo ay ku jiraan akoonnada korontada, gaaska, telefoonka gacanta, iyo interneedka. Si toos ah ayaa loogu xidhi karaa waxaana loo sheegi karaa xafiisyada amaahda ganacsiga.
Waxa kale oo aad gacanta ku dari kartaa noocyada kale ee kharashyada ganacsiga caadiga ah, sida xisaabaadka iibiyaha, kirada, caymiska, heshiisyada, iyo adeegyada sharciga. eCredable ayaa gacanta dib u eegis ku samayn doona xisaabaadka ka hor inta aanay ka warbixin.
Intee in le'eg ayaad ku bilaabataa?
Dhibcaha deymaha shakhsi ahaaneed waxay u dhexeeyaan 300 ilaa 850, iyadoo inta badan deyn bixiyayaasha ay u baahan yihiin dhibco ah ugu yaraan 600 si ay ugu qalmaan amaah shakhsi ah. Inta badan hay'adaha amaahda ganacsiga yaryar waxay u baahan yihiin ugu yaraan buundada buundada ganacsiga ee 75. Dhibcaha buundooyinka ganacsigu waxay u dhexeeyaan eber ilaa 100.
Intee in le'eg ayay qaadataa in la dhiso credit ganacsi?
Dhisidda credit-ka shirkaddu waxay qaadan kartaa saddex sano ama ka badan, sida ay qabaan khubaradu, halka dayn-bixiyeyaasha qaarkood laga yaabo inay dalbadaan hal sano. Nidaamyadani waxay kaa caawin doonaan inaad bilowdo haddii aad raadinayso inaad abuurto sumcad ganacsi cusub.
Intee in le'eg ayay qaadanaysaa in buundooyinka ganacsiga lagu muujiyo warbixintaada deynta?
Iibka la sheegi karo waxay qaadan kartaa ilaa 30 maalmood si ay uga soo muuqdaan warbixinta deynta ganacsiga. Tani waa run iyada oo aan loo eegin haddii ay khibrad lacag bixineed oo wanaagsan iyo mid xunba ay lahaayeen.
Intee in le'eg ayay qaadanaysaa in la haysto dhibcaha 700?
Si loo horumariyo taariikhda deynta ku filan dhibcaha dhibcaha FICO, oo loo isticmaalo 90% ee go'aamada amaahda, waxay u baahan doontaa ku dhawaad ​​lix bilood oo waxqabad deyn ah. 1 FICO credits waxay u dhaxaysaa 300 ilaa 850, iyada oo dhibcaha 700 ama ka badan loo arko inay wanaagsan yihiin. Dhibcaha 800 ama ka badan ayaa loo arkaa mid gaar ah.
Dhibcahaaga ganacsigu waa sida deymahaaga shakhsi ahaaneed oo kale. In kasta oo samaynta credit-ka ganacsigu aanay saamayn ku lahayn noloshaada gaarka ah, waxay samayn kartaa ama burburin kartaa ganacsigaaga.
Natiijo ahaan, waxaad u sahlanaan doontaa inaad sameyso go'aano xog-ogaal ah oo kalsooni leh haddii aad baarto 10ka tabo-dhisidda amaahda oo aad barato aasaaska waxa credit-ka ganacsigu yahay, sida ay u shaqeyso, iyo sababta ay muhiim u tahay.
In kasta oo samaynta iyo dhisidda credit-ku ay qaadato wakhti, haddana aad bay u qalantaa dadaalka. Marka aad leedahay taariikh credit wanaagsan, waxa ay had iyo jeer u shaqayn doonaa si aad faa'iido.
Maxay Tahay Kaarka Amaahdu Sideese U Shaqaysaa? | Tilmaan dhamaystiran
Kaararka Amaahda Xawilaadda Dheelitirka Ugu Fiican Sanadka 15
Sida Fudud looga helo W-2 Loo-shaqeeyayaashii hore
Saaxiibbadii iyo Doordash: Keebaa Ku Guulaysta Loolanka Bixinta Cuntada 2022?
Had iyo jeer waxaa loo baahnaan lahaa in albaabkaaga cunto lagu keeno. Iyo, doorashada adeegga gaarsiinta...